Global Voices teny Malagasy » Hetsika Ho Fahatsiarovana ny Kapiteny Mbaye Diagne, Maherifo Senegaley ao Rwanda · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Jona 2013 10:18 GMT 1	 · Mpanoratra Abdoulaye Bah Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Mainty, Rwanda, Senegal, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Voina, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Mbola mitohy manerana izao tontolo izao ny fotoam-pahatsiarovana ofisialin'ny lasibatry ny fandrimpaham-bahoaka tao Rwanda tamin'ny 1994. Saingy ankavitsiana ny mbola mahatadidy ny Kapiteny Mbaye Diagne . Nefa dia nampiseho herimpo tokoa io tanora manamboninahitry ny tafika senegaley io nandritra ny fotoana be fieboeboana fotsiny ny ambiny manerana izao tontolo izao. Efa an-taonany i Enrico Muratore no nitolona mafy mba tsy ho latsaka any amin'ny fanadinoana ny anaran'io maherifo io.
Sarin'ny kapiteny Mbaye Diange ao amin'ny pejy facebook-n'ny fikambanana mitondra ny anarany (nahazoana alalana).
Nanontanian'ny Global Voices zavatra maromaro i Enrico Muratore ny amin'ny tanjony mahatonga azy hanao hetsika amin'ny alalan'ny fikambanana K apiteny Mbaye Diagne – Nekkinu Jàmm :
Enrico, afa-manolotra ny tenanao amin'ny alalan'ny teny vitsivitsy ve ianao ?
Miarahaba, mpiasan'ny Firenena Mikambana misahana ny zon'olombelona aho taloha ka nirahina hitandro ny fandriampahalemana ary efa niasa tany Rwanda ihany koa, firenena izay nahaliana ahy tokoa hatramin'ny nisian'ny fandripaham-bahoaka tamin'ny 1994. Italiana aho ary niaina teto Afrika nandritra ny 15 taona ary tao Senegaly efa-taona izao.
Tamin'ny 31 mey, nikarakara lanona-pahatsiarovana miaramila senegaley maty nandritra ny fandripaham-bahoaka nitranga tany Rwanda tamin'ny 1994 ianareo. Azonareo azavazavaina ve ny anton'ny lanonana ?
Nankalaza ny fahatsiarovana ny Kapiteny Mbaye Diagne izahay, izay miaramila mpanara-maso tao amin'ny MINUAR  (Iraka Mpanampy ny Firenena Mikambana Ao Rwanda). Vantany vao nanomboka ny fandripaham-bahoaka tamin'ny 7 avrily 1994, dia nanomboka nanira-tena nanao ny asam-pamonjena tsy nanam-piadiana izy, mba hanavotan izay azony natao. Nanomboka tamin'ny famonjena ny zanaky ny praiminisitra Rwandey Agathe Uwilingyimana, izay vao nisy namono izy, taorian'ny nandripahana ny mpiaro azy izay nahitana mpialatsaka an'elonaina Belza folo. Raha nanapa-kevitra ny hanaisotra ny 9/10 n'ny miaramilany izay efa tao an-toerana ny Firenena Mikambana (izay tokony afa-nanohitra soa aman-tsara ny fandripaham-bahoaka), dia mbola nisy miaramila 270 nijanona, ary anisan'ireo ny kapiteny, izay mbola nahasahy nanohy ny asam-pamonjena ny hafa hatrany, mandra-pahafatiny tamin'ny 31 mey 1994, rehefa nahavony olona manakaiky ny 600 teo ho eo, hono. Izany no ankalazainay ny fahatsiarovana izany lehilahy marina sy tia ny hafa ka nanome ny ainy ho fanavotana ny an'ny hafa izany androany.
Inona ny tanjon'ny fikambanana izay ianao no niaviany ? Iza avy ny mpikambana ? Misokatra amin'ny mpikambana hafa ihany koa ve ?
Ny kendren'ny fikambanana dia ny hampuiroborovo ny fahatsiarovana ny kapiteny Mbaye Diagne sy ho fanohanana ny fivelaran'ny fianakaviany, satria tsy rariny raha ilaozana ny fianakavian'ireo nanome ho an'ny hafa. Ny sorona nataony tsy midika hoe tsy tia ny tenany sy ny fianakaviany izy mazava loatra ! Noho izany tsy maintsy mba manao zavatra ho azy ireo. Ny filohan'ny fikambanana dia ramatoa Yacine Diagne, vady navelan'ny kapiteny ; ny filoha-lefitra dia ny kolonely Faye izay naman'ny kapiteny ary tany Rwanda niaraka taminy tao amin'ny MINUAR ; izaho manokana moa no sekretera jeneraly (SG) ary ny zanaky ny kapiteny, Coumba sy Cheick, no mpanampy ny SG ; eo ihany koa i Ras Makha Diop, filozofa, mpanao zaridaina sy artista senegaley, izay mpitahiry vola, nisolo an'itompokolahy Docteur Adotevi olona tsara sy nahafatra-po. Ao aminay ihany koa ny mpikambana mpanorina tahaka an'i Pierantonio Costa, konsily honorera tao Rwanda sy nahavonjy olona 2000 tsy ho faty nandritra ny fandripaham-bahoaka, Mark Doyle izay masoivohon'ny BBC sady naman'ny kapiteny, ny mpiasam-panjakana ambony Bacre Ndiaye ao amin'ny Komisarià Ambonin'ny Zon'Olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana, izay nanoratra tatitra nilaza mialoha izay hitranga tao Rwanda tamin'ny fotoana naha-mpitatitra manokana azy momba ny famonoana tsy araka ny fitsarana (fitsaram-bahoaka?) tamin'ny 1993, ary eo ihany koa ny olo-manakaja senegaley sy vahiny, ka ny ankamaroany dia efa namita iraka indray na indroa nampanaovin'ny Firenena Mikambana azy ireo tany Rwanda, na olo-pantany na olona mankasitraka fotsiny ny fanolora-tena nataony ho famonjena olo-tsy mana-tsiny. manaiky hatrany izahay ny handray mpikambana vaovao, raha hita fa tena mankasitraka tokoa ny nataon'ny Kapiteny izy ary mana-pikasana ny hanohana ny tanjon'ny fikambananay.
Miresaka maherifo iray isika ! Inona avy ny fantatra momba azy hatreto ?
Maro n fitaovana azo alaina amin'ny aterineto, saingy marina fa tsy mahalala an'i Kapiteny ny sarambambembahoaka manerana izao tontolo izao. Nefa ankatoavin'ny fitondrana rwandey amin'ny fomba ofisialy ny fanolora-tena nataony, nomen'ny sekreteram-panjakana amerikana Hillary Clinton  voninahitra ihany koa, ary nasandratry ny Giardino dei Giusti del Mondo  [it], fikambanana Italiana Manohitra ny Fandripaham-bahoaka ihany koa, ankoatra izay tsy voatonona.
Inona ny zavabita hatreto ?
Na ny fananganana fikambanana aza dia efa zava-bita satria tsy mora ny manao izany. Manana pejy Facebook antsoina hoe Fikambanana Kapiteny Mbaye Diagne – Nekkinu Jàmm  ary efao andalam-pananganana tranonkala amin'ny fiteny maro izahay; manomana hetsika miaraka amin'ny mpanao gazety izahay. Ohatra amin'izany ny tafatafa tamin'ny 31 mey farany teo , nilazalazan'ny vadiny ny fomba nampahafantarana azy ny fahafatesany sy nitantrany ny tsiahiny (sovenira). Ny Fatto Quotidiano  tany Italia, ary tao amin'ny Radio Ouest Africaine pour la Démocratie  na ny fampitam-baovao senegaley tamin'ny fotoana talohaloha kokoa ; nisy ihany koa ny hetsika tahaka ny fifaninanana baolina fandaka sokajy zandriny niarahana nanomana tamin'ny Fédération Sénégalaise de Football  ; eo ihany koa ny vavaka fiareta-tory fanao isaky ny marainan'ny 31 mey ao amin'ny tranon'ny fianakavian'ny kapiteny.
Nanambady ve izy ary nanan-janaka? Lasa aiza ?
Noadinoina fotsiny izao ny fianakaviany hatramin'izay fotoana izay. Ankehitriny antenaina ny fikambanana izay najoronay fa hanampy azy ireo bebe kokoa handrenesana ny feon'izy ireo ary hampakatra avo ny fahatsiarovana ny vadiny, ny rainy, satria fakan-tahaka izy ary tena ilaina amin'ny fanabeazana ny tanora sy ny mponina amin'ny ankapobeny, tao anatin'izay fotoana nisaritahana sy nahery setra izay.
Maty tany am-pamitàna iraka ny kapiteny Mbaye, sa tsy izay ? Inona ny efa nataon'ny manampahefana tao an-toerana sy ny Firenena Mikambana ?
Aleo manontany ny vadiny sady filohan'ny fikambanana, amin-dramatoa Yacine Diagne, fa ny amin'izay fantatro dia tsy nanao na inona na inona ny Firenena Mikambana ankoatra ny fiantohana aina nataon'ny kapiteny ary nanome ny kapiteny ny “tambim-pahafatesana” ho an'ny fianakaviana 19 taona lasa izay ary dia tsy nisy intsony. Andala-paharavana ny tranon'ny fianakaviana, tsy maintsy nitady vonjy tany amin'ny rahavavin'i Yacine iray ry zareo; very taona maromaro ny ankizy tany am-pianarana, nanana olana ara-pahasalamana maro ny vavimatoa Coumba, antitra sady marary ny renin'ny kapiteny. Ny fianakaviana tena akaiky sy ny namana vitsivitsy avy amin'ny tafika ihany no mba nanao zavatra ; ankehitriny ny fikambanana no manao izay azony atao.
Ny maty moa dia Andriamanitra irery ihany no mikarakara azy ireny, sy ireo olona vitsy izay manana fahatsiarovan-tena kely. Efa nitady fifandraisana tamin'ny Biraon'ny Firenena Mikambana misahana an'i Afrika Andrefana tamin'ny anaran'ny izahay, fotoana vitsivitsy lasa izay, saingy mbola tsy namaly hatrany ry zareo. Manantena izahay fa mbola hamaly ry zareo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/06/18/49374/
 Kapiteny Mbaye Diagne: http://fr.wikipedia.org/wiki/Mbaye_Diagne
 fikambanana K: https://www.facebook.com/pages/Association-du-Capitaine-Mbaye-Diagne-Nekkinu-J%C3%A0mm/193623944006365?fref=ts
 Hillary Clinton: http://fr.wikipedia.org/wiki/Hillary_Rodham_Clinton
 Giardino dei Giusti del Mondo: http://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_dei_Giusti_del_Mondo
 tranonkala amin'ny fiteny maro : http://acmdpeace.org/
 tafatafa tamin'ny 31 mey farany teo: http://www.bbc.co.uk/afrique/nos_emissions/2013/05/130531_invite.shtml
 Fatto Quotidiano: http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/05/31/te-do-io-lonu7-silenzio-degli-amici/612381/
 Radio Ouest Africaine pour la Démocratie: http://wadr.org/fr/pages/static/95/Qui-sommes-nous.htm
 Fédération Sénégalaise de Football: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fédération_sénégalaise_de_football